काठमाडौं : नागरिक लगानी कोषले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । नाफा गत वर्षको भन्दा १४.५६% धेरै हो । गत वर्ष कोषले १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको सेयर पुँजी पनि २२.०५% बढेर १ अर्ब १० करोड २३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष सेयर पुँजी ९० करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
जगेडा कोष पनि २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबाट बढेर ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असोज मसान्तसम्म कोषले मुद्दति निक्षेपमा ७८ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ राखेको छ भने संगठित संस्थाको सेयरमा ९ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा ६० करोड रुपैयाँ लगानी छ । यसैगरी कर्जा लगानी १६ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । नागरिक लगनाी कोषको प्रतिसेयर आम्दानी ४४ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ २१२ रुपैयाँ छ । गत वर्ष यसैअवधिमा प्रतिसेयर आम्दानी ४७ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ २०८ रुपैयाँ थियो ।
नागरिक लगानी कोषको समग्र अवस्था यहाँबाट हेर्नुहोस्
नेप्से ३ कम्पनीको बोनस र ऋणपत्र सूचीकरण
बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय र उनकी छोरीलाई पनि देखियो कोरोना
साधना लघुवित्तको आइपीओ कहिले हुन्छ बाँडफाँट ? यसो भन्छ बिक्री प्रबन्धक
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता
एनआरएन, किसान र दिव्य लघुवित्तको सोमबारबाट एकीकृत कारोबार हुने
मौद्रिक नीति कस्तो चाहिन्छ ? हेर्नुहोस् कसले के भने ?